Al-Shabaab iyo dadka deegaanka Ceel-Cali oo ku dagaalamay dhagax qaali ah - Latest News Updates
Wararka naga soo gaarayo Gobolka Hiiraan, Gaar ahaan deegaanka Ceel-Cali ayaa sheegaya inuu halkaas ka dhacay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac kaasoo u dhaxeeyey dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab iyo dadka Deegaanka.
Dagaalka dhex maray dadka Deegaanka Ceel Cali iyo Al-Shabaab ayaa yimid kadib markii deegaanka lagu arkay Dhagax qaali ah oo dadka deegaanka ay heleen.
Maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab oo maqlay Dhagaxa Qaaliga ah ee heleen dadka Ceel Cali ayaa weerar kusoo qaaday, waxayna taas keentay inuu qarxo dagaal dhiig badan ku daatay.
Sida ay sheegeen dadka deegaanka, dagaalka ayaa waxaa ku dhintay laba qof oo Shacab ah, halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen ilaa 5 qof oo kale.
Sidoo kale dagaalka ayaa wuxuu Khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh kasoo gaaray maleeshiyadii ka tirsaneyd Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday.
Odayaasha Dhaqanka Deegaanka Ceel Cali ayaa arrintaan ku tilmaamay wax laga xumaado, iyagoo xusay in Dhagaxaas uu keenay dhimashada 2 qof oo Shacab ah iyo dhaawaca tiro intaas ka badan.